रामेछाप कारागारमा पानीको हाहाकार/नुहाउन नाम दर्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
रामेछाप कारागारमा पानीको हाहाकार/नुहाउन नाम दर्ता
पुस ९, २०७४ टीकाप्रसाद भट्ट
रामेछाप — जिल्ला कारागारमा सुरक्षा नेतृत्व गर्ने प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) पीताम्बर आचार्यको शनिबार नुहाउने पालो थियो । ‘आज मज्जाले नुहाइयो,’ उनले भने, ‘एक बाल्टिन पानीले नुहाइयो । उब्रेकाले लुगा पनि धोएँ ।’ कारागारमा पानीको हाहाकार भएपछि नुहाउनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई पालो मिलाइएको छ ।
रजिस्टर बनाएर रेर्कड नै राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । कसले कुन दिन नुहायो ? त्यसको सम्पूर्ण विवरण राखिन्छ । पालो मिचेर दोहोर्‍याएर नुहाउन पाइँदैन । ‘मैले २ गते नुहाएको थिएँ×,’ सई आचायले भने, ‘त्यसपछि आजै पालो आयो ।’ कारागार सुरक्षाका लागि कम्तीमा २० जना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । नियमित पानी नआएको धेरै भयो । कहिले आउँछ, कहिले बन्द हुन्छ । बालमन्दिर नजिकको ट्यांकीबाट वितरण गरिएको खानेपानी लाइन अवरुद्ध हुँदा अभाव चर्किएको छ ।
सुरक्षाकर्मीको त यस्तो हालत छ । कैदीबन्दीको अवस्था कस्तो होला ? कारागारमा २ सय ६९ कैदीबन्दी छन् । उनीहरूको नुहाउने पालो सुरक्षाकर्मी लाई जस्तो सातामा आउँदैन । २२ दिन जतिमा पालो पाउँछन् । कारागारभित्र पनि रजिस्टर राखेर नुहाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जति नै फोहोर भए पनि पालो नआई नुहाउन पाउँदैनन्, उनीहरू । चौकीदार रामकुमार प्याकुरेलले भने, ‘मन लागेका बेला नुहाउन पाउनु ठूलो कुरा हो तर पानी पुर्‍याउन सकिँदैन ।’ कैदीबन्दी फुस्रा देखिन्छन् । फोहर लुगा धुन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । बजार क्षेत्रमा समेत पानीको उस्तै अभाव छ ।
सुकाजोरको खिर्रे मुहानबाट ल्याएको पानी बीचमै हराएपछि अहिले सबैतिर हाहाकार छ । ‘हामीलाई पानी अमृतजस्तै भएको छ,’ रामेछाप नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष केदार कार्कीले भने, ‘पानीको साँच्चिकै अभाव भयो ।’ कार्कीका अनुसार खिर्रेको पानी बीचमै गायव भएपछि त्यसको खोजीका लागि स्थानीय जुटेका छन् । ‘पाइप निकाल्दै पानी जाँच्दै गरेका छौं, भेटिएको छैन । कता चुहियो पत्तै भएन,’ उनले भने ।
त्यहाँको पानी जोडियो भने कारागारमा अहिलेको जस्तो हाहाकार हुँदैन । कारागारका लागि बेग्लै लाइन जोडिएको छ । त्यसमा अरू धारामा भन्दा धेरै पानी आउँछ । आचार्यले भने, ‘त्यही लाइनको पानी आउँदा पनि पुग्दैनथ्यो, अहिले झन् के पुग्थ्यो । सिम्लेखोलाबाट पानी लिफ्ट गर्ने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले सुख्खाक्षेत्र अन्तर्गत निर्माण थालेको उक्त योजना पूरा भएपछि पानीको अभाव नहुने कार्कीले बताए । ‘रामेछापमा अब धेरै दु:खका दिन छैनन्,’ उनले भने, ‘सिम्लेखोलाको पानी आए मज्जाले नुहाउन पाइन्छ ।’
प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १९:२०
हचुवाको भरमा खोला थुन्ने बाँध, दुई सातामै भत्कियो
पुस ९, २०७४ भरत जर्घामगर
सिरहा — लागत इष्टिमेट र प्राविधिक डिजाइनबिनै हचुवाको भरमा खोला थुन्न बनाइएको ‘बालुवा बाँध’ भत्किएको छ ।
लहान नगरपालिकाको मध्य भागबाट बग्ने खुट्टी खोलामा सिंचाईका लागि बनाइएको बाँध दुई हप्तामै भत्किएको हो । यसबाट पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत रकम खेर गएको छ ।
प्राविधिक डिजाइन र लागत इष्टिमेटबिना ३२ वर्षभन्दा अघिदेखि बन्द रहेको नहरमा पानी चढाउन नगरपालिकाले खुट्टी खोलामा साढे तिन मिटर अग्लो डेढ किलोमिटर लम्बाईको बालुवाको बाँध निर्माण गरेको थियो । एक्साभेटरबाट बालुवा तानेर सतहमा ५ देखि ६ र टुप्पोमा डेढदेखि साढे दुई मिटर चौडाईको बाँध निर्माण गरिएको थियो ।
नगरपालिकाले बालुवाले भरेर बाँध निर्माणका लागि प्रतिघण्टा ३ हजार ३ सय रुपैयाँ लागत दरमा एक्साभेटर भाडामा लिएको थियो । ‘बाँध निर्माणका लागि घण्टाको हिसावमा एक्साभेटर भाडामा ल्याइएको थियो,’ सव ईन्जिनियर शिवशंकर चौधरीले ‘नहर सफाई र बालुवा बाँध निर्माणका लागि डेढ सय घण्टा जति एक्साभेटर चलेको छ ।’
उनले भने, ‘खोला र नहरको सतह हेर्दा पनि पानी चढने कुनै सम्भावना थिएन ।’
बाँध निर्माणका लागि कुनै प्राविधिक डिजाइन र इष्टिमेट नभएको उनले जनाए । स्थानीय सरकारको रुपमा क्रियाशील नगरपालिकामा प्राविधिक लगायत विषयगत फाँट छन् । बाँध निर्माण योजनाबारे प्राविधिक तथा योजना शाखाले जानकारी नभएको जनायो ।
लहान नगरपालिकाले हचुवाको भरमा खुट्टी खोलामा निर्माण गरेको बालुवाको बाँध र भत्केको बाँधस्थल । तस्बिर : भरत जर्घामगर/कान्तिपुर
प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १८:४९